“Izaho Mihitsy no Hitady ny Ondriko” (Ezekiela 34:11)
Efa nisy fotoana ve ianao nanembona ny fiarahana nahafinaritra tamin’ny vahoakan’i Jehovah, ohatra hoe fivoriana nampahery, fivoriambe nampientanentana, fanompoana nahitana vokatra tsara, na resadresaka nampahery tamin’ny mpiray finoana? Mbola tsy nanadino an’i Jehovah ianao raha izany, ary izy koa tsy nanadino anao. Tsy hohadinoiny mihitsy ny fanompoana nataonao, ary tena te hanampy anao hiverina aminy izy.
Hoy i Jehovah: ‘Izaho mihitsy no hitady ny ondriko sy hikarakara azy. Hokarakaraiko tokoa ny ondriko, toy ny fikarakaran’ny mpiandry ondry ny andian’ondriny amin’ny andro hahatongavany eo amin’ny ondriny izay efa niparitaka. Ary hovonjeko avy any amin’ny toerana rehetra niparitahany izy ireo.’—Ezekiela 34:11, 12.